शिवरात्रिका कथा र मान्यताहरु - Nepal's No.1 News portal
नेपाल ज्योति फागुन१७-हिन्दु धर्मका अनुसार शिवरात्रि भगवान शिवको महत्वपुर्णदिन हो । शिवरात्रिका किन भनिएको र किन मनाइन्छ भन्नेबारे सबैतिर भिन्न भिन्नै कथाहरु सुन्न पाईन्छ । शिवरात्रिका दिन भगवान शिव र पर्वतिको मिलनको दिन भएकोले शिवरात्रि मनाइन्छ भन्ने पनि हामिले सुन्दैनै आएका छै । कुनै-कुनै बिद्दानहरुको भनाई अनुसार शिवरात्रिकै दिन भगवान शिवले अमुत-मन्थन गर्दा निस्किएको कालकुट नामक बिष पिएर संसारलाई बचाउनु भएको हो भन्ने पनि काहि कतै सुनिन्छ । तर हामिले सुन्दै र मान्दै आएको अर्को एउटा कथा छ । माहादेव र शिकारीको कथा ,,,,,,
शिवपुराणका अनुसार ,
पौराणिक कालमा एउटा बनमा एक शिकारी बस्ने गर्थिए। उन्को नाम थियो गुरु द्रुहु । शिकारीको परिवार संख्या ठुलो थियो साथै उक्त शिकारी एकदमै क्रुर स्वभावको थियो । शिकारी शिकार गर्नुको साथै चोरि पनि गर्ने गरर्थियो । कहिले कुनै पुजा पाठ धर्म गर्दैन थियो ।त्यस्तैमा एकदिन शिवरात्रिको अवसर आयो तर जङ्गलमा बस्ने हुनाले ऊस्लाई उक्त पर्वको बारेमा केहि थाहा थिएन । घरमा बुद्दा बुबा आमा र सुत्केरी पत्नि भोकले कायल भएको देखेपछि गुरु द्रुहु शिकारको खोजिमा हिड्यो तर तेसदिन उस्ले कुनै पनि शिकार भेटेन ।
तेस्तैमा घाम अस्तायो रात पर्यो ,अब भने शिकारीलाई घरमा भएको भोको परिवारको चिन्ताले सताउन थाल्यो ।घरमा परिवार भोको भएको उस्लाई रित्तो घर फर्किन मन लागेन।नजिकै एउटा पोखरी थियो मन मनै सोच्यो कुनै न कुनै जिव याहा पानि खानको लगी अवस्य आउने छ , तेसैको शिकर गर्नेछु , अनि घर जाउला,यो सोचेर शिकारी नजिकै रहेको बेलको रुखमा चड्यो ,ठिक त्यस बेलको रुख मुनि शिव लिङ्ग स्थापित थियो ।
बस्दा-बस्दै रातको पहिलो प्रहर हुन लाग्यो । त्यसबेला सम्म पनि कुनै शिकार पानि खान नआए पछि शिकारी निरास भयो । बिहान देखि केहि पनि नखाएको हुदा भोक प्यासले ब्याकुल थियो । तेस्तैमा एउटा हरिणी तिर्खाएर पानि खान पोखरीमा आइ । हरिणिलाई देखेर शिकारी खुसीभयो त्यसैबेला हतार- हतार धनुष टाङ्नै आटदा शिकारीको हातले आफ्नो छैउमै राखेको कम्णडुलको पानी छल्किन गयो साथै रुखको हाङ्गाबट केहि बेलपत्रको पात पनि खस्न गयो । यसरी रातको पहिलो प्रहरमा शिव लिङ्गमा अभिसेक हुन गयो अनि भगवान शिवको पहिलो चरणको पुजा सम्पन्न हुन गयो ।
तेस्तैमा सर्याङ सुरुङ्ग सुनेर हरिणिले के रहेछ भनेर माथी हेर्दा त शिकारी धनुष तेरस्यर बसिराखेको यो देखेर हरिणिको सात्तो गयो । बिन्ति गर्दै भनि मेरो घरमा साना साना बालक बच्चा छन जो दुधक लागि प्रतिक्षा गरिरहेका छन् मलाइ छाडि देउ तर शिकारि क्रुर स्वभावको भएको कारण हरिणको एक पनी सुनेन भन्यो मेरो पनि घरमा बाल बच्चा परिवार भोकले ब्याकुल छन तिमी लाई यसै छाडे तिन्लाई के खुवाउला ? यति सुनेर अब आफ्नो केही नचल्ने देखे पछि हरिणिले बाचा गर्दै भन्न लागि ठिकै छ कमसेकम मेरा भोको बच्चालई दुघ खुवाएर आउने समय त पक्कै दिन्छौ होलानि शिकारी? म भगवान शिवको कसम खाएर भन्छु म पक्का फर्केर आउने नै छु । याति सुनेपछी शिकारी सोच मग्न भयो र राजी भएर भन्यो । हुन्छ तर छिट्टै आउनु भनि बिदा दियो ।
एसतै सबमा रातको दोस्रो चरण नजिक आयो शिकारी नसुतेरै हरिणि आउने पर्खाइमा बसिरहेको थियो । रातको चिसोमा जाडो भएर उस्को मुख बट शि..व….शि..व……को सुस्केर निस्किरहेको थियो । तेसतैमा दोस्रो हरिणि तलाउमा पानि खान भनेर आइ ,पहिलो हरिणी आउने न आउने टुङ्रागो नभएर आत्ततिएको शिकारी उत्त हरिणी लाइ देखेर खुसि भयो । दोस्रो चरणमा पनि शिकारीले धनुष टाङ्नै के आटेको थियो । शिकारीको हातले फेरि पनी कम्णडुलको पानी छल्किन गयो साथै उसै गरी रुखको हाङ्गाबट बेलपत्रको पात पनि खस्न गयो, यसरि भगवान शिवको दोस्रो चरणको पुजा सम्पन्न हुन गयो।
सर्याङ सुरुङ्ग सुनेर हरिणले माथी हेर्दा त शिकारी धनुष तेरस्यर बसिराखेको यो देखेर दोस्रो हरिणीको पनि सात्तो गयो अनि बिन्ति गर्दै भनि मेरो घरमा मेरा परिवार कुरिरहेका छन, एक पटक भेट्ने मौका दिनुस शिकारी म भगवान बिष्णुको कसम खाएर भन्छु म पक्का फर्केर आउने नै छु । शिकारी भन्न लाग्यो तिमी भन्दा पहिलो हरिणिले पानि यहि भनेकि थिइ तर फर्केर आइन् । हरिणी भन्न लागि मेरो बिस्वाश गर्नुस यादि मैले घर पुगिन भने जिबन भर मेरा परिवार मैले घात गरेको समझेर बस्ने छन् । मलाइ खोज्न निस्किने छन दुख पाउने छन् , तिनलाइ मनाएर म तुरुन्त फर्केिने छु , याति सुनेपछी शिकारी फेरि पनी राजी भएर हुन्छ तर छिट्टै आउनु भनि बिदा दियो ।
एसतै सबमा रातको तेस्रो चरण नजिक आयो। निद्राले र भोकले आकुल ब्याकुल भएको शिकारी दुबै हरिणी नफर्किएपछि रिसले छटपटाएर बसेको थियो । उता दुबै हरिणीको भेट भयो दुब्ै ले आफ्नो आफनो कथा सुनाए र बिबाद गर्न थाले । पहिलो हरिणी ले आफु जाने करा मा अड्ढि लिइ भने दोस्रो हरिणी म जान्छू हजुर बाल बच्चाको ख्याल राख्नु भन्दै थिइ । यो सब कुरा ति दुबैका पति हरिण बाहिर बसेर सुनिरहेका थिए ।केहि नबोलि हरिण तलाउ तिर लाग्यो ।रातको तेस्रो चरण लाग्यो ।
तेस्रो चरणमा शिकारी उनै दुइ हरिणिका पतिलाइ पानि खान आइ रहेको देख्यो र तुरुन्तै धनुष तेरस्यर भन्यो मर्नको लागी तयार होउ तिमिलाइ मारेर अब म मेरो परिवारको भोक शान्त पार्नेछु । यो सबै क्रममा उसै गरेर रातको तेस्रो प्रहरको पुजा सम्पन्न भएको शिकारीलाई पत्तोनै भएन । हरिणले नम्र हुदै भन्यो म धन्य भए आज मेरो जिबन सफल भयो किन भने मेरो देह कसैको भोक टार्नको लागि काम आउने भयो बरु ढिला नगरी कर्य सम्पन्न पर्नुहोस । हरिणको जवाफ सुनेर शिकारी छक्क पर्यो गफ गाफमै रातको चौथो प्रहरको नजिक हुनै लाग्दा हरिणका दुइ पत्नि सहित बाल बच्चा पनि तेहि आइपुगे र भन्न लागे हामि एक अर्का बिना बाच्न सक्दैनै कृपा गरेर ढिला नगरी हामि माथि बाण प्रहार गर्नुस यो सुनेर शिकारीको मनमा करुण पैदा भयो ,किनभने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको पुजाले उस्को चित्त सुद्द भइसेको थियो ,अनि सबैलाइ घर जाउ भनेर बिदा दियो।
यो सबै देखेर भगवान शिव अति प्रशन्न हुनुभयो। खुशि भइ शिकारीलाइ दर्शन दिनु भयो र आशिरर्वाद दिनु भयो । तेस दिन बाट मान्यता छ कि शीवरात्रीको दिन जास्ले रात भर जागरम बसेर माहादेवको पुजा नाम जप गर्छ तेस मनुस्यको समपुर्ण चाहाना तथा मनो आकान्क्षा पुरा हुनेछन ।
यो कथा पढ्ने याहाँहरु समपुर्णको पनि मनोआकांक्षा पुराहोस भन्दै माहाशिवरात्रिको धेरै धेरै शुभकामना व्यत्त गर्दछौ। नेपाल जयोति टिम
sarusarukakiपशुपतिनाथमाहाशिवरात्रिशिवसरु आचार्यसरु कालि
पितृ, मातृभक्त, ठूलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने आदर्श पुरुषलाई कोटि- कोटि प्रणाम , राम नवमीको शुभकामना